क्याम्प नाउमा चेल्सी र बार्सिलोनाको भिडन्त, को पुग्ला अन्तिम आठमा ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४०८:२८0
काठमाडौं, २९ फागुन । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा आज राति स्पेनिस माहारथी बार्सिलोना र इंग्लिस च्याम्पियन चेल्सीबीचको खेल हुँदैछ ।
बार्सिलोनाको मैला क्याम्प नाउमा हुने खेल राति १:३० बजे सुरू हुनेछ । फागुन ९ गते चेल्सीको मैदानमा भएको पहिलो लेग १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो । उक्त खेलमा चेल्सीका लागि विलियनले गोल गर्दा बार्सिलोनाका लागि मेस्सीले गोल गरेका थिए । दुवै टिम आज जितका लागि मैदान ओर्लिदैँ छन् ।
किनकी अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि स्पष्ट जित आवश्यक छ । आजको खेलमा जित निकाल्ने टोली च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम आठमा प्रवेश गर्नेछ ।
प्रिमियर लिगको साविक विजेता चेल्सी र ला लिगा लिडर तथा च्याम्यिन्स लिगको प्रमुख दावेदारकारूमा हेरिएको बार्सिलोनाबीचको खेल फुटबल प्रेमीहरूका लागि प्रतिक्षित बनेको छ ।
बार्सिलोनाको मैदानमा खेल्नु अघि चेल्सीका प्रशिक्षक एन्टेनियो कोन्टेले बार्सिलोनाले घरेलु मैदानको भरपुर फाइदा उठाउने प्रयास गरेपनि आफुहरूले उत्कृष्ट खेल पस्कने दाबी गरेका छन् । ‘यो ठूलो पिच भएको एक शानदार स्टेडियम हो । यो खालको खेल यस्तो मैदानमा खेल्न हरेक खेलाडी उत्साही हुन्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरा धेरै खेडालीहरूले यो स्टेडियममा खेलेका छैनन् । पहिलो पटकमै हामी सबैभन्दा राम्रो गर्न चाहान्छौं ।’
उनले पहिलो चरणमा राम्रो खेलेको र दोस्रो चरणमा अझ राम्रो खेल पस्कँदै जित निकाल्ने जिम्मेवारी आफुहरूलाई भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘पहिलो चरणमा हामीले विश्वकै उत्कृष्ट टोली विरूद्ध राम्रो गरेका थियौं । दोस्रो चरणमा बार्सिलोनाले घरेलु मैदान र दर्शकको फाइदा उठाउँदै अन्तिम परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्नेछ,’ कोन्टेले भनेका छन्, ‘खेल जित्न हामीले राम्रो खेल्नुपर्नेछ । हामीसँग ठूलो एकाग्रता र जिम्मेवारी समेत छ ।’
पहिलो लेगमा गोल गरेका चेल्सीका विलियनले अन्तिम आठमा स्थान बनाउन राम्रो खेल्नुपर्ने र आफुहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भलभर्डेले चेल्सीको आक्रमण क्षमतलाई ध्यानमा राखेर खेल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘चेल्सीको काउन्टर अट्याक गर्ने क्षमता हामीलाई थाहा छ । एडेन हर्जाड र विलियन जस्ता खेलाडीले खेल परिवर्तन गर्न सक्छन् । त्यसैले हामीले ध्यान दिएर खेल्नुपर्ने छ,’ उनले भनेका छन् । उनले जितका लागि गोप्य सुत्र खोज्ने प्रयास गरेको र जसले सिधै क्वाटरफाइनलको यात्रा तय गराउने बताएका छन् । उनले आफुहरूका लागि ब्राजिलियन मिडफिल्डर विलियन खतरा हुन सक्ने टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
चोटग्रस्त बार्सिलोनाका कप्तान इनिएस्टा खेलमा फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर उनी खेल्ने नखेल्नेबारे खेल सुरूहुनुभन्दा केही अघि मात्र पत्ता लाग्ने बताइएको छ । भलभर्डेले इनिएस्टा फर्कने संकेत गरेका छन् । तर नेल्सन समेडो र डेनि स्वारेजले भने चोटका कारण यो खेल गुमाउने भएका छन् । यही सिजन लिभरपुलबाट आएका फिलिपे काउटिन्हो भने युएफएको नियमका कारण यो सिजन च्याम्पियन्स लिगका कुनै पनि खेल खेल्ने छैनन् । चेल्सीका मिडफिल्डर रस बर्क र डिफेन्डर डेभिड लुइज चोटग्रस्त छन् । उनीहरू बिना नै चेल्सी मैदान उत्रनेछ ।
के जनता पोष्टको बिचल्ली भएकै हो त ?
युरोपा लिगको नकआउट चरण समिकरण पुरा, को को पुगे ?
च्याम्पियन्स लिगः चार समुहका अन्तिम खेल सकिए, को को पुगे अघिल्लो चरण ?